Fiahiana ara-tsosialy : fiaraha-miasan’ny Cnaps sy ny fiangonana advantista | NewsMada
Fiahiana ara-tsosialy : fiaraha-miasan’ny Cnaps sy ny fiangonana advantista
Par Taratra sur 09/06/2016
Betsaka ny fanampiana ara-tsosialy omen’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps) ny mpiasa, saingy vitsy ireo misitraka izany, latsaky ny 10%. Araka izany, niantso ny tompon’andraikitry ny Sampandraharaha asa sosialy sy ny fahasalamana (Sass) ao amin’ny Cnaps ny mpitantana ny fiangonana advantista, hanofana ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao amin’izy ireo.
“Tanjon’ny fiangonana advantista ny hanaja ny lalàna velona eto amin’ny firenena satria tsy mifanohitra amin’ny foto-keviny izany”, hoy ny pasitera Rasolonomenjanahary Robert, mpitambolan’ny fivondronamben’ny fiangonana advantista aty amin’ny Ranomasimbe indianina.
Notsiahivin-dRandrianarijaona Charles Emilson, lehiben’ny Sass, fa zo fototra mahaolona ny fananana fiahiana ara-tsosialy, ary voarakitra ao anatin’ny andininy faha-22 ao anatin’ny fanambarana ny zon’olombelona. Natao ho an’ny rehetra ny Cnaps ary porofon’izany izao fampiofanana izao.
Nahatonga solontena tamin’ity fiofanana ity avokoa ny lafiny valon’ny Nosy, toy ny avy any Andapa, Sambava, Fianarantsoa, Tomasina, Toliara, sns.